Isikhumba esomile yezandla - inkinga ijwayelekile abesifazane abaningi
Cishe wonke owesifazane nomusa kakhulu ngokubukeka kwabo. I ubulili fair njalo bazinakekele. Babewabona wonke ukungapheleli entsha ngokuningiliziwe, isibonelo, induna encane, indawo obomvu noma yini enye, owesifazane esondela ngokushesha ayibulale noma okungenani esingalindelekile. Isikhumba esomile yezandla - lokhu ingenye izinkinga ezibhekene abesifazane abaningi, kungakhathaliseki ubudala babo noma impilo jikelele. izandla Dry kungaholela ekulahlekelweni kuyaqina, ububomvu, uyaxebuka, kanye amanxeba amancane imifantu. Konke lokhu Yiqiniso, akusho engeza ukuba ubuhle besifazane hhayi ukukhulisa imimoya wakhe. Nokho, le nkinga solvable ngokuphelele. Ngokushesha zama ukuthola ukuthi kungani kubonakala kuyinkinga ezifana izandla isikhumba esomile.
Isimo lapho isikhumba ezandleni zethu, ngokuqondile ahlobene nomsebenzi nezindlala sebaceous, njengoba bazi ukuthi banesibophezelo amafutha. Ngakho-ke isikhumba esomile kungenzeka ngenxa ukusebenza kahle. Ngakho ukuntuleka umswakama kungaba kokubili isikhumba fat ukukhathala ungqimba zokuzivikela.
Ake sibheke ukuthi kungani isikhumba sakho siba ezomile. Izizathu kungaba nhlobonhlobo. Okuvame kakhulu wabo - kuyinto ukuchayeka njalo futhi isikhathi eside yezandla emanzini. Ikakhulukazi kuthinta isimo izandla ukusetshenziswa insipho ezihlukahlukene. Isizathu siwukuthi emanzini, ikakhulukazi ekuhlanzeni ejenti, ungqimba zokuzivikela omane wageza off izandla. Lapho isikhumba nabo amanzi isikhathi eside, kokuba uyeke ukugcina umswakama ngokwazo, ngoba Lokhu nje akudingekile (umswakama emanzini eziningi). Futhi lapho kuhlanzwa khona amanzi uphela, izingalo, zibancishe umswakama kanye ungqimba zokuzivikela is wesula, okuholela isikhumba esomile. Kulokhu, ungakwazi ngokushesha uzizwe yobunzima yayo.
Esinye isizathu ukuthi kungenziwa isikhumba esomile - ukuthi ezungeze imvelo. I ibavuthela futhi uya woma kangaka, ijubane ngokushesha umswakama abadukelene bonke ubuso umzimba. Kulesi sisekelo, kungaba iphutha ukuphetha ngokuthi abandayo kahle isikhumba, kodwa akuyona. Isikhathi abandayo yonyaka kunomthelela ukoma izandla. Lokhu kungenxa umehluko lokushisa. Esikhathini esiyiminyaka ezibandayo izakhiwo evuthayo, emoyeni humidified ababuthakathaka ngakho kuzo. Lapho kokuphuma ekamelweni evuthayo phezu ngaphandle ezibandayo, isikhumba azizwa lokushisa abukhali iconsi, sebum sikhula futhi ilahlekelwa amandla abo okuphila umlilo ukugcina umswakama. Ngenxa yalokho, wadalula isikhumba desiccate.
isikhumba esomile kakhulu yezandla kungaba lapho amavithamini noma yokungezwani komzimba ukuze ukudla. Ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo nabanye izithasiselo chemical bayakwazi zilulaza isikhumba. Kuthinte isikhumba izandla kungaba yofuzo nezifo ezithile, njengesifo sikashukela noma dermatitis.
I zemvelo ukuguga kwesikhumba, ezihlobene nokukhula, futhi kubangela kome isikhumba yezandla. Mayelana nezinguquko negative ezihlobene nokukhula ezenzeka emzimbeni, izindlala sebaceous kancane kancane siqale ukukhiqiza fat kancane. Ngaphezu kwalokho, encishisiwe kanye nenani uketshezi emzimbeni. Konke lokhu aluphumeleli ngokuyize ukuba lowo muntu isikhumba.
Kunoma yimuphi umuntu, ngokuqinisekile, it is ukuthi kuba lula kakhulu ukuba afeze izinkinga yesondlo ukukhalima kuka ukwelashwa yayo. Isikhumba esomile yezandla kulokhu iyathinteka. Ngakho-ke, ukuze babe izandla yakho la ibi khona ukubonakala enhle futhi icocekile njalo, kufanele ngokucophelela zinakekelwe. Ngo kubanda gqoka amagilavu efudumele. Ngesikhathi esifanayo, kufanele igqoke, ngisho noma uhlela ukuhlala ngaphandle eside. Ngezinsuku libalele ashisayo, sebenzisa ukhilimu nge isikhumba elangeni nomphumela. Uma usebenzisa amanzi, insipho nomjuluko kanye emhlabathini, gqoka amagilavu iraba noma vinyl. Hand ukugeza kungcono ukusebenzisa ukhilimu insipho. Ngemva contact ngezandla amanzi, zisebenza amafutha okuthambisa. Ebusuku, isandla kungenziwa nivame ngovaselina futhi ukugqoka amagilavu ukotini. Konke lokhu izinyathelo eziyisisekelo futhi elula isikhathi eside kubuyise ngesisa nobuhle yezandla zakho.
Yini ebangela kuzuze ubukhulu eMoscow? Umlando kanye inqubo ephakeme ubukhulu eMoscow
Nitrofungin Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
International Dog Show "Eurasia"
Amazing izakhiwo itshe charroit
Inhlanzeko yomuntu siqu izinto. Ukubeka beautician umgwaqo
Sifunda ukuqhutshwa kwamagagasi